ဒီနည်းကတော့ ထရိတ်ဒါတွေအနေနဲ့ အတိုးနှုန်းနည်းတဲ့ ငွေကြေးအမျိုးအစားကို ရောင်းချပြီး အတိုးနှုန်းများတဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစားကို ၀ယ်ထားရတဲ့ နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ဒီနည်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အတိုးနှုန်းတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို အသုံးချပြီး leverageဆတိုးအကူအညီနဲ့ အမြတ်များများရှာနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.
ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင် အမေရိကအတိုးနှုန်းက ၁%ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ တောင်အာဖရိကအတိုးနှုန်း ၇%ဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့. ဒါဆိုရင် ဒီနှစ်နိုင်ငံကြားက အတိုးနှုန်းကွာခြားချက်ကြားက ၆%ကွာနေတဲ့ဟာကို အမြတ်ရအောင်လုပ်နိုင်နေပါပြီ. ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင် အတိုးနှုန်းနည်းတဲ့ USDကို ချေးငှားပြီး ( အတိုးနှုန်းနှန်းတဲ့အတွက် ချေးရတာကောင်းတယ် အတိုးပေးရတာနည်းတယ်ပေါ့ဗျာ) အတိုးများတဲ့ ငွေကိုဝယ်ထားသင့်ပါတယ်. ကျနော်တို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဥပမာမှာဆိုရင် တောင်အာဖရိကငွေကြေး Randကိုဝယ်ထားသင့်ပါတယ်. Leverageကိုသုံးပြီးတော့လဲ အမြတ်ငွေများအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်. ဥပမာ သင်ယူတဲ့ leverageက ၁၀း ၁ဆိုရင် ပုံမှန်ရမယ့်အမြတ်ရဲ့ ဆယ်ဆဖြစ်တဲ့ ၆၀%ကို အမြတ်ရနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဒီထရိတ်ဒင်းစတိုင်ရဲ့နောက်မှာ - မမျှော်လင့်ဘဲ ၇ုတ်တရက် ငွေလဲနှုန်းပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ အလွန်ကိုမှကြီးတဲ့ အန္တရာယ်ကြီးရှိနေပါတယ်. အပေါ်ကဥပမာမှာ တောင်အာဖရိကငွေ ZARက USDနဲ့ယှဉ်တဲ့အခါ ZARက ထိုးကျသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်တော့ကွဲပါပြီ. ရှုံးပါပြီ.
ဒါကြောင့် ကယ်ရီထရိတ်က အရမ်းကောင်းတဲ့ပုံပေါ်နေပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေမှာ တကယ့်ကို အန္တရာယ်များတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါ. ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကိုပဲမြင်ပြီး အတိုးနှုန်းတစ်ခုတည်းအပေါ်ကြည့်နေတဲ့အခါ ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျအခြေအနေ အလားအလာတွေကို ကြည့်ဖို့အားနည်းသွားတတ်ပါတယ်.
ကယ်ရီထရိတ်နည်းနဲ့ ထရိတ်တဲ့သူတွေဟာ အတိုးနှုန်းကွာခြားချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲမကြည့်ဘဲ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေကိုပါ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သုံးသပ်နိုင်မှသာ ပိုပြီး အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ အမြတ်ကို ရရှိနိုင်မှာပါ.
ကယ်ရီထရိတ်ဒါတွေထဲမှာ Julian Robertsonက နာမည်အကျော်ကြားဆုံးသော ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်ပါ. သူက USD/JPYအတွဲကို ထရိတ်လေ့ရှိပါတယ်. ၁၉၉၅ - ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ ဒီငွေကြေးအတွဲမှာ အတိုးနှုန်းကွာခြားချက်က ၆၆%အထိ ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကယ်ရီထရိတ်ဒါတွေက အတိုးနှုန်းနည်းတဲ့ ယန်းကိုရောင်းပြီး အတိုးနှုန်းများတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ၀ယ်ထားကြပါတယ်. USD/JPYအတိုးနှုန်းက ၆၆%တောင်ကွာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကယ်ရီထရိတ်ဒါတွေဟာ သူတို့အရင်းရဲ့ ၁၅%အထိအောင် အမြတ်ရခဲ့ကြပါတယ်. Julian Robertsonဟာဆိုရင်လဲ USD/JPYအတွဲကို leverageယူထရိတ်ပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အမြတ်အများအပြားရရှိခဲ့တာပါ. ဒါပေမယ့် ၁၉၉၈ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ Yenတန်ဖိုးက ရုတ်တရက်ထိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာ ယန်းကိုရောင်းထားတဲ့ ဂျူလီယန်တစ်ယောက် ၂ဘီလျှံလောက်အထိ အထိနာ အရှုံးပေါ်ခဲ့ရပါတယ်.